Imisebenzi Ezuzisa Kakhulu Yemali Eyidijithali | Imisebenzi E-Paxful
Joyina umndeni we-Paxful
Lapha e-Paxful, silwela ukwenza izinguquko eziphawulekayo ekuphileni kwabantu kwansuku zonke. Sikholelwa ukuthi inkululeko engokwezimali iyilungelo lawo wonke umuntu futhi sihlose ukwenza lokhu kube yinto engokoqobo. Yiba yingxenye yomzamo wethu futhi wenze umehluko!
Bona izikhundla ezivulekile
Ingabe ufuna ukwazi ukuthi iyini i-Paxful? Bukela le vidiyo enhle uthole impendulo!
I-Paxful yasungulwa ngo-2015 ivela ezingqondweni zabasunguli uRay Yousef kanye no-Artur Schaback, ababenephupho lokuthi izinkonzo nemikhiqizo yezimali itholakale kuwo wonke umuntu oyifunayo. Namuhla, i-Paxful ingenye yezimakethe ezinkulu ze-Bitcoin peer-to-peer emhlabeni, isiza amakhasimende angaphezu kwezigidi ezintathu emhlabeni. Ushintsho lwe-P2P selufikile.
Ithimba labaphathi be-Paxful
Ukusebenza e-Paxful kuyinto engavamile. Njengoba inamahhovisi amane athe chithi saka emhlabeni, amathimba ethu ahlale esebenza. Sisebenza kanzima, sidlale kakhulu, bese sisebenza nakakhulu ukuze siqinisekise ukuthi sihlala sihamba phambili. Ngokuvamile uzothola izisebenzi zase-Paxful zidlala umculo, zizivocavoca, zihlafuna okuthile noma zizipholele elangeni. Kungase kubonakale sengathi siyadlala kodwa sibizana ngokuthi siwumndeni ngoba siyathandana futhi siyakuthanda esikwenzayo.
E-Tallinn E-New York City E-Hong Kong E-Manila
E-New York City
Ngokuvamile i-Tallinn ibhekwa njenge-“Silicon Valley” yaseYurophu. Idolobha elincane kodwa elichumayo elaziwa ngamabhizinisi alo amancane akhangayo kanye nezakhiwo zakudala ezinhle. Umoya wabantu lapha wokusungula okusha kanye nokucabanga ngendlela evulekile, wenza i-Estonia ibe yindawo enhle ithimba lethu lemikhiqizo elingenza kuyo imikhiqizo esezingeni eliphezulu neshintsha ukuphila.
Bheka izikhundla ezivulekile
I-New York, e-USA
I-New York City ingenye yezikhungo ezinkulu zezimali emhlabeni futhi ibe yindawo efanele ekhethiwe i-Paxful engakhula kuyo kuyilapho iheha labo engasebenzisana nabo. Njengoba iqale iyinkampani enabantu ababili kuphela, ihhovisi lase-New York liye lakhula ngokushesha laba namalungu asebenza eminyangweni ehlukahlukene, kuhlanganise umnyango wezomthetho kanye namathimba okulandelwa kweziqondiso asebenza ngokuzikhandla ukuba akhuphule i-Paxful ibe nkulu nakakhulu.
I-Hong Kong iyindawo echichimayo ngokwamasiko eye yakhula yaba ngenye yezindawo zebhizinisi ezimatasa kakhulu emhlabeni. Ihhovisi lase-Hong Kong liyikhaya lamathimba ethu okukhangisa nokuthuthukiswa kwebhizinisi, athatha amagxathu amakhulu ekuxhumeni izimakethe zase-Asia nomhlaba jikelele.
I-Manila iyidolobha eliyinhloko kwezomnotho, ezombusazwe, ezenhlalo nezesiko e-Philippines. Enye yezimboni ezinamandla nezikhula ngokushesha e-Manila yi-information technology-business process outsourcing (IT-BPO). Yingakho i-Manila yakhethwa ukuba ihambe phambili emathimbeni ethu ajabulisa amakhasimende nakhangisayo.
Umgomo wethu yinkululeko ngokomnotho ngezezimali ze-peer-to-peer. Ngenkundla evikelekile nenembile eyakhiwa amakhasimende aqinisekisiwe, sihlose ukuvula amasango ezimali emhlabeni futhi siguqule zonke izimali. Libeka imfundo phambili, ithimba lethu lifuna ukusiza abantu abavela kuwo wonke umhlaba baxhumane futhi bakhe ubuhlobo nomunye nomunye, okubavumela ukuba bafunde futhi bakhule ndawonye. Ekugcineni kumayelana nokwenza umehluko ohlala njalo ekuphileni kwabantu yonke indawo. Ushintsho olungokoqobo olulethwa abantu abangokoqobo.
Izisebenzi zethu ziyinjini ye-Paxful. Njengoba sivela emasikweni nasezizindeni ezingafani sihlala sifunda komunye nomunye. Okuhle kakhulu nakhu. Wonke umuntu angafunda izilimi ezintsha kanye namasiko amasha. Singase sibe nalo ithimba lomkhiqizo eliqondile kodwa inkundla yethu iwumphumela wokusebenza nokuphawula kwawo wonke amathimba kanye neminyango.
Njenganoma yimuphi umndeni, izinto zingase zibe nzima kakhulu, kodwa ekupheleni kosuku sisondelene ngenxa yothando kanye nentshisekelo yalokho esikwenzayo. Siye sakhula kakhulu kusukela ngesikhathi siqala futhi sihlale sifuna abantu abasha abanomfutho nekhono. Faka isicelo somsebenzi manje uthole ukuthi ungenezela kanjani ebuhleni bethu!
Siyayikhathalela impilo yakho
Sihlinzeka ngokudla kwasemini nokwakusihlwa nsuku zonke, ukuba yilungu lendawo yokuzivocavoca oyithandayo, imithi ehlukahlukene eyizithasiselo zempilo, ukubhucungwa, kanye nemicimbi yempilo yethimba. Ukubonana nodokotela abasezingeni eliphezulu nge-inthanethi.
Sizibophezele ekukhuleni kwakho
Kusukela ekuboneni amayunivesithi kuwo wonke umhlaba kuya ekukunikezeni izinsiza ezingenamkhawulo zokuqeqesha kanye nokukhula emsebenzisi, sikholelwa ukuthi ukuphela kwendlela yokuthuthuka ukuqhubeka ukhula futhi ufunda.
Ukushintsha umhlaba akulula. Ngakho ukulinganisela kuwo wonke umsebenzi onzima, sihlinzeka ngemisebenzi, imicimbi kanye nokuzikhipha okukhokhelwa yinkampani ukuze uzijabulise, ubone ezinye izinto, futhi uxhumane nabanye osebenza nabo kwamanye amazwe.
Injini ye-Paxful. Amathimba ahlukahlukene okukhiqiza asebenza ndawonye ngokushesha okukhulu, ahlala enza imikhiqizo emisha, ethuthukisa esikhona kakade futhi ecabanga ngokungenziwa esikhathini esizayo ngezezimali ze-peer-to-peer.
Amathimba ahlukahlukene okukhiqiza asebenza ndawonye ngokushesha okukhulu, ahlala ecabanga ngezindlela ezintsha zokuthuthukisa okuthandwa abasebenzisi. Abaklami, Abaphathi Bomkhiqizo kanye Nabahlaziyi besebenzisa amakhono abo, bashintsha imibono ibe yimikhiqizo nezinto ezisebenzisekayo.
Ukuthobela Iziqondiso, Ukukhwabanisa Kanye Nokuthandwa Amakhasimende
Umnyango we-Paxful omkhulu kakhulu uhlukanisiwe waba semazwekazini ahlukahlukene ukuze kuqikelelwe ukusekelwa nokuxazululwa kwemibango 24/7. La mathimba asebenzela ukuphephisa inkundla yethu kanye nabasebenzisi, ukuqikelela ukuthi imithetho eyimfuneko iyalandelwa kanye nokuhlolwa kwe-blockchain okuthe thuthu.
Laba ngabantu abachazela wonke umuntu emhlabeni ngezezimali ze-peer-to-peer. Besebenzisa ezokusakaza ezivamile kanye nezesimanje, bahlose ukufinyelela abantu emhlabeni wonke ngemfundo, ngokuqukethwe nangokwakha umphakathi.
Le minyango ifana namafutha emshinini wethu. Iqikelela ukuthi izincwadi zethu zezimali zihlelekile nokuthi imisebenzi yethu ilandela imithetho.
Abantu abaqikelela ukuthi i-Paxful ihlala iyindawo yokusebenza engcono kakhulu! Baqondisa yonke imizamo yabantu bethu, baqondise nazo zonke izindaba eziphathelene nokuthuthuka kwenhlangano, kanye nokunakekela ukulawulwa kwehhovisi kuhlanganise namanye amaphrojekthi okuphatha ahlukahlukene.
Indlela yokujoyina umndeni we-Paxful
Umsebenzi ovumelana nawe kanye nesicelo somsebenzi
Yini ongayenza ukuze uphumelele engxoxweni yomsebenzi?
Funda mayelana ne #BuiltWithBitcoin kanye nomsebenzi wethu wokufuna ukuthola ubulungisa kwezomnotho sisebenzisa i-Bitcoin.
Hlola izinkundla zethu zezokuxhumana. Uma ungazi ukuthi iyini i-Bitcoin, cwaninga ukuze uqonde okuyisisekelo mayelana nomthelela wayo kwezobuchwepheshe nezomnotho
Hlola ama-akhawunti ethu ezinkundla zokuxhumana ukuze uqonde isiko lethu kanye nendlela yethu yokuxhumana
Sitshele okungale kwalokho okubhalwe encwadini yakho yokufuna umsebenzi! Yini ekwenza uhluke kwabanye abantu?
Landela i #lifeatpaxful ku-Instagram ukwazi ukubona kancane ukuphila kwethu kwansuku zonke
Bheka okuningi ku-instagram